किन पुरुष भन्दा महिला डिप्रेसनका शिकार हुन्छन् ? यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ? - आजकोNepal
किन पुरुष भन्दा महिला डिप्रेसनका शिकार हुन्छन् ? यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ?
संवाददाता १६ कार्तिक २०७७, 3:00 pm
एक्लोपना डिप्रेसनको एउटा प्रमुख कारण हो । यदि तपाईंको परिवारमा कोही डिप्रेसनबाट पीडित छ भने जति सकिन्छ उसँग समय बिताउनुहोस् ।